माओ जेडोंग चीन - जीवनी
माओको सुरुवात जीवन
26 डिसेम्बर, 1899 मा मासु परिवार, शान्शायन, हनान प्रांत, चीनको धनी किसानको जन्म भयो। तिनीहरूले केटा माओ जेडोंग नाउँ गरे।
बच्चाले पाँच वर्षको लागि स्कूलमा कन्फुगियान क्लासिक्स अध्ययन गरे तर 13 वर्षको उमेरमा छोडे खेतीमा पूर्ण-समय मद्दत गर्न। विद्रोही र शायद खराब, युवा माओ धेरै स्कूलहरु बाट हटाइएको थियो र धेरै दिन सम्म घर बाट भाग्यो।
सन् 1 997मा माओका बुबाले आफ्नो 14 वर्षीय छोराको विवाह गरे। माई परिवारको घर जाने क्रममा पनि उनको 20 वर्षीया दुलहीलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे।
शिक्षा र मार्क्सवादको परिचय
माओवादीले हान प्रांतको राजधानी चाङ्ग्शामा गएर आफ्नो शिक्षा जारी राख्न। उनले6महिना 1911 र 1912 मा चाङ्ग्सामा बैरकमा एक सैनिकको रूपमा बिताए, जसको शासनले राजा राजालाई पराजित गर्यो। माओले सन वाट्ससनको लागि राष्ट्रपति बन्नुभयो, र उनीहरूका मन्चु विद्रोहीको चिन्हको कपाल ( कतार ) को उनको लामो चोटी काटेर।
1913 र 1918 को बीचमा माओ शिक्षकहरूको प्रशिक्षण स्कूलमा अध्ययन गरे, जहाँ उनले अझ धेरै क्रान्तिकारी विचारहरू गम्भिर गर्न थाले। उनी सन् 1917 र रूसी क्रांतिद्वारा मोहित भएका थिए, र चौथो शताब्दीको अन्ततः चीनी दर्शन वैज्ञानिकता भनिन्छ।
स्नातक पछि, माओ आफ्नो प्रोफेसर योङ चांगजीलाई बेन्जिङमा लागे, जहाँ उनले बेइजिङ विश्वविद्यालय लाइब्रेरीमा नौकरी लिइन्। उनको पर्यवेक्षक, ली ढोका, चीन कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्य थियो, र माओको विकासशील क्रांतिकारी विचारहरूलाई धेरै प्रभाव पारेको थियो।
सन् 1 99 1 मा माओले आफ्नो विवाहको बावजूद आफ्नो प्रोफेसरकी छोरी यांग काईईलाई विवाह गरे। उनले त्यस बर्ष कम्युनिस्ट म्यानिभोजको अनुवाद पढेर एक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी बने।
छ वर्ष पछि, राष्ट्रवादी पार्टी वा कुओमिन्टङ चियांग काई-शेक अन्तर्गत कम्तीमा 5,000 कम्युनिष्टहरू शंघाईमा हत्या गरे।
यो चीनको गृहयुद्धको सुरुवात थियो। त्यो गिरोह, माओले चाउन्हुमा कुमन्टिंगङ (केएमटी) विरुद्ध शरद ऋतुको उत्थानको नेतृत्व गरे। केएमटीले माओका किसान सेनालाई कुटपिट गरे, उनीहरूको90% मारिए र बचेकाहरू ग्रामीण इलाकाहरूमा फर्काउन बाध्य भए, जहाँ उनीहरूले थप किसानलाई तिनीहरूको कारणले सताए।
जून 1928 मा, केएमटीले बीजिंग लिनुभयो र विदेशी शक्तियों द्वारा चीनको आधिकारिक सरकारको रूपमा चिनिन्थ्यो। माई र कम्युनिस्टहरूले दक्षिणी हान र जियांग्मी प्रान्तहरूमा किसानहरूको सोभियतहरू स्थापित गरे। उनले माओवादीको आधारमा राखेका थिए।
चाङ्ग्शाको स्थानीय युद्धकर्मी माओको पत्नी, यांग काईईई र 1930 को अक्टोबरमा उनीहरु मध्ये एक जनालाई पक्राउ गरे। उनले कम्युनिज्मलाई इन्कार गर्न इन्कार गरे, त्यसो भए यो युद्धकर्ताले उनको 8 वर्षीय छोराको मुखमा शिरिरहेकी थिइन्। माओले तेस्रो पत्नीलाई विवाह गरेकी छिन्, उहाँ जेजेन, त्यस वर्षको मईमा।
सन् 1931 मा माओओ चीनको सोभियत गणतन्त्रको अध्यक्ष जीआईजीपी प्राधिकरणमा थियो। माओले भूकम्पको विरूद्ध आतंकको शासनको आदेश दिए; सम्भवतः 200,000 भन्दा बढी अत्याचार र मारिएका थिए। उहाँको रेड आर्मीले प्रायः गरीब-हतियार तर फराकिलो किसानहरूको निर्माण गरे, जसमा 45,000 सङ्ख्या थियो।
केएमटी दबाब बढाउन, माओ उनको नेतृत्वको भूमिकाबाट छुटेको थियो। चियांग काई-सिङ्कका सेनाहरूले जियांग्कीका पहाडहरूमा लाल सेनालाई घेरेर, 1934 मा उनीहरूलाई हानिकारक भाग लिन बाध्य पार्न।
लङ्ग मार्च र जापानी व्यवसाय
लगभग 85,000 रेड आर्मी सैनिकहरू र अनुयायीहरू जियांग्कीबाट फर्के र शान्कीको उत्तरी प्रांतमा 6,000 किलोमिटर चाप चल्थ्यो। बिस्तार ठुलो मौसम, खतरनाक पर्वत पथहरू, निर्जीव नदिएकाहरू, वारस्वार्थहरूले वा केएमटीहरूले आक्रमण गरेर, कम्युनिस्टहरूको मात्र 7,000919मा शानक्सीलाई बनायो।
यो लङ्ग मार्चले चीन कम्युनिष्टहरूको नेताको रुपमा माओ जेडोंगको स्थानलाई सम्मान गर्यो। उनीहरूको डरलाग्दो अवस्थाको बावजूद उहाँ सैनिकलाई रिलिज गर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो।
सन् 1937 मा जापानले जापानलाई आक्रमण गर्यो। चिनियाँ कम्युनिस्ट र केएमटीले यस नयाँ खतरालाई पूरा गर्न आफ्नो गृहयुद्धलाई रोक्न, जो द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानको 1945 लाई पराजित भयो।
जापानले बीजिंग र चिनियाँ तटलाई कब्जा गर्यो, तर आन्तरिक रूपमा कहिल्यै कब्जा गरेनन्। चीनको सेनाहरूले पनि युद्ध गरे। कम्युनिस्टहरू गुरिल्ला रणनीतिहरू विशेष गरी प्रभावकारी थिए।
त्यसबाहेक, 1938 मा, माओ तलाकले उहाँले जज्जेनलाई विवाह गर्नुभयो र अभिनेत्री जियांग किंगसँग विवाह गर्नुभयो, पछि "माडम म्यु।" भनिन्छ।
सिभिल युद्ध पुनरुत्थान र पीआरसीको स्थापना
यद्यपि उनले जापानी विरुद्ध युद्धको नेतृत्व गरे, माओ आफ्नो वर्तमान सहयोगी, के.एम.टी.बाट सत्तालाई पराजित गर्न योजना बनाइयो। माओले आफ्नो विचारहरूलाई धेरै प्रकारका पामफोलीहरूमा उल्लिखित, जसमा ग्यारिल्ला युद्ध र युद्धमा आधारित युद्ध सहित । 1944 मा, यूएस डाइसी मिशनलाई माओ र कम्युनिस्टहरू भेट्न पठाउनुभयो; अमेरिकन कम्युनिस्टहरू राम्रो संगठित र केएमटी भन्दा कम भ्रष्ट भेटिए, जसले पश्चिमी सहयोग पाएको थियो।
द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य पछि, चीनी सेनाहरूले उत्तीर्णमा फेरि लड्न थाले। मोरङको चाङ्गचुनको 1948 घेराबन्दी थियो, जसमा रेड आर्मीले अहिले जनताको लिबरेशन आर्मी (पीएलए) भनिन्, यसले चाङ्गचुन, जिलिन प्रान्तमा कुओमिन्टङ्गको सेनालाई पराजित गर्यो।
अक्टोबर 1, 1949मा माओ चीनको जनता गणतन्त्रको स्थापनाको घोषणा गर्न पर्याप्त भरोसा थियो। 10 डिसेम्बरमा, PLA ले सिङ्गुआ, सिचुआनमा अन्तिम केएमटी गठबन्धनलाई पराजित गर्यो। त्यस दिन चिया काई-सिङ्क र अन्य केएमटी अधिकारीहरूले ताइवानको मुख्य भूमिबाट भाग लिए।
पंचवर्षीय योजना र ठूलो पछाडि अगाडि
फोहोर नगरिएको शहरको छेउमा आफ्नो नयाँ घरबाट, माओले चीनमा कडा सुधारहरू दिए। मकान मालिकहरू मारिएका थिए, सम्भवतः देशभरि 2-5 मिलियन, र तिनीहरूको भूमि गरीब किसानहरूलाई पुन: वितरित गरियो। माओको "काउन्टरराइभर्सरहरू रोक्न अभियान" ले कम्तीमा 800,000 अतिरिक्त जीवनहरू, प्रायः केएमटी सदस्यहरू, बुद्धिमानीहरू र व्यवसायीहरूको दाबी गरे।
1951-52 को तीन-विरोधी / पाँच-विरोधी अभियानमा, माओले "धनी सत्र" सार्वजनिक भएको व्यक्तिलाई धनी मान्छे र संदिग्ध पूंजीवादीहरूलाई लक्षित गर्ने निर्देशन दिए। धेरैजना जो प्रारम्भिक पिटाइ र अपमान बन्नु पछि आत्महत्या गरे।
1953 र 1958 को बीच माओले चीनको औद्योगिक शक्ति बनाउन रुचाउँदा पहिलो पंचवर्षीय योजना सञ्चालन गर्यो। उनीहरूको प्रारम्भिक सफलताबाट बृद्धि भयो, अध्यक्ष माओले दोस्रो पंचवर्षीय योजनाको उद्घाटन गरे, "जनवरी 1958" को " ग्रे पट्टि फर्वार्ड " भनिन्छ। उहाँले किसानहरूलाई आग्रह गर्नुभयो कि उनीहरूलाई आफ्नो गाउहरूमा फलाम झुकाउन बरु फसल झुकाउनु। परिणामहरू विनाशकारी थिए; 1958 ÷ 60 को महान समृद्धमा अनुमानित 30-40 मिलियन चिनियाँ चिनियाँ।
माओको विदेश नीतिहरू
माओ चीनमा शक्ति लिनुभन्दा केही समयपछि उनले कोरियाली युद्धमा कोरियाली युद्धमा दक्षिण कोरियालीहरूसँग दक्षिण कोरिया र संयुक्त राष्ट्र संघको विरुद्ध लड्न पठाए। पीवीए ले किम इल-सुंगको सेनालाई पराजित गरिसकेको छ, जसको परिणामस्वरूप आजसम्म जारी रह्यो।
सन् 1951 मा माओले पीएलए तिब्बतलाई दलाई लामाको शासनबाट "मुक्त" गर्न पठाए।
1 995सम्म, सोभियत युनियनसँग चीनको सम्बन्धले स्पष्ट रूपमा बिग्रिएको थियो। दुई कम्युनिस्ट शक्तियों को महान छलांग अग्रेषण, चीन को परमाणु महत्वाकांक्षी, र चलने चीन-भारतीय युद्ध (1962) को ज्ञान मा असहमत हो। 1962 सम्म, चीन र यूएसएसआरले चीन-सोभियत विभाजनमा एकअर्कालाई सम्बन्ध राखेको थियो।
अनुग्रहबाट माई फल्सहरू
1962 जनवरीको जनवरीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने बीजिंगमा "सात हजार सम्मेलन" आयोजना गरे।
सम्मेलन कुर्सी लियू शाओचीले कठोर रूपमा ठूलो लप फर्वार्डको आलोचना गरे, र निस्पंदन, माओ जेडोंग द्वारा आलोचना गरे। माओलाई सीसीपीको आन्तरिक शक्ति संरचनामा धकेलियो; मध्यप्राथमिक गणतंत्र लियू र डेंग जियाओपिंगले अष्ट्रेलिया र क्यानाडाबाट अल्पसंख्यक बचेको खाना खाएर कम्युनिष्टका किसानहरु र आयातित गेहूंलाई मुक्त गर्यो।
धेरै वर्षको लागि, माओले चिनियाँ सरकारले मात्र हेर्नुको रूपमा सेवा गर्यो। उनले त्यो समय खर्च गर्न शक्ति फिर्ता र लियू र डेंगमा बदला।
माओवादीले शक्तिशाली, बीचको शक्ति र सम्भावनाको बीचमा पूंजीवादी प्रवृत्तहरु को दर्शन को प्रयोग गर्नेछन्, फेरि एक पल्ट सत्ता लिन को लागी।
1966 को अगस्तमा 73-वर्षीय माओ कम्युनिस्ट केन्द्रीय समितिको प्लेनममा एक भाषण गर्नुभयो। उनले देशका जवानहरूलाई दावीवादबाट फिर्ता लिनको लागी बोलाए। यी जवान " रेड गर्ड्स " मा माओको सांस्कृतिक क्रांतिमा गन्दाको काम गर्दछन्, "पुरानो परम्पराहरू, पुरानो परम्परा, पुरानो बानीहरू र पुरानो विचारहरू" - "चौधरी" नष्ट पार्छन्। हू चीताटोको बुबा जस्तै एक चिनियाँ कोठा मालिक पनि "पूंजीवादी" को रूपमा लक्षित गर्न सकिन्छ।
जबकि राष्ट्रका विद्यार्थीहरूले पुरातन कलात्मक कलाकृति र ग्रंथहरू, मंदिरहरू जलिरहेका छन् र बौद्धिकहरूलाई मारेर थिए, माओले पार्टी नेतृत्वबाट लियू शाओकी र डेंग जियाओपिंगलाई पराजित गर्न सकेनन्। लियूको जेलमा हानिकारक परिस्थितिमा मृत्यु भएको थियो; डाक्टर एक ग्रामीण ट्रेक्टर कारखानामा काम गर्न निर्वासित भएको थियो, र उनको छोरो चौथी-कहानी खिचिएको थियो र रातो गार्ड्सले पक्षाघात गर्यो।
सन् 1 996मा माओ मा सांस्कृतिक क्रांति पूरा गरे, यद्यपि यो 1976 मा उनको मृत्यु हुँदै गयो। पछि चरणहरु जियांग किंग (माडम माई) र तिनका साथीहरु द्वारा " चार को गंगा " भनिन्छ।
माओबाबुको स्वास्थ्य र मृत्यु
1970 को दशकमा माओको स्वास्थ्य निरन्तर बिग्रियो। उनी पार्किन्ससनको बीमारी वा एएलएस (लु गेहेरिग रोग) बाट पीडित हुन सक्थे र हृदय र फेफ्रिज समस्याको कारण धूम्रपानको जीवनकालमा ल्याइयो।
1976 जुलाईको जुलाई, जब देश ठूलो तांगन भूकम्पको कारण संकटमा परेको थियो, 82 वर्षीया माओ बीजिंगमा अस्पतालको बिस्तारमा सीमित थियो। उहाँले सेप्टेम्बरमा सुरु हुने दुईवटा प्रमुख आक्रमणहरूको सामना गर्नुभयो, र9सेप्टेम्बर 1976 मा जीवन समर्थनबाट हटाइने क्रममा मरे।
माओ जेडोंगको विरासत
माओको मृत्युपछि चीनी कम्युनिस्ट पार्टीको मध्यम व्यावहारिक शाखाले सत्ता पार्यो र बायाँवादी क्रांतिवादीहरूलाई पराजित गर्यो। डेंगियाओपिंग, अहिले राम्ररी पुनर्निर्माण गरिएको छ, देशलाई पूंजीवादी शैली विकासको आर्थिक नीतिको रुपमा नेतृत्व र सम्पत्ति निर्यात गर्न। मामामा माओ र चार सदस्यहरुका अन्य गंग गिरफ्तार गरिएका थिए र सांस्कृतिक क्रांतिसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण अपराधहरूका लागि अनिवार्य रूपमा प्रयास गरियो।
आज माओवादीको विरासत एक जटिल छ। उहाँलाई "आधुनिक चीनको संस्थापक पिता" भनिन्छ, र नेपाली र नेपाली माओवादी आन्दोलनहरूको जस्तै 21 औं शताब्दीको विद्रोहलाई प्रेरणा दिलाउँदछ। अर्कोतर्फ, उनको नेतृत्वले आफ्नो आफुको बीच यूसुफ स्टललिन वा एडल्फ हटलर भन्दा बढी मृत्युको कारणले गर्दा।
डन अन्तर्गत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्र, माओलाई आफ्नो नीतिमा "70% सही" घोषित गरियो। तथापि, डनले भने कि ठूलो हास्य "30% प्राकृतिक आपदा, 70% मानव त्रुटि" थियो। यद्यपि, माओ विचारले यस दिनका नीतिहरू डोऱ्याउन जारी राख्छ।
Clements, जोनाथन। माओ जेडोंग: लाइफ र टाइम्स , लन्डन: हाउ प्रकाशन, 2006।
छोटो, फिलिप। माओ: ए लाइफ , न्यू यर्क: म्याकमिलन, 2001।
टेरिल, रस। माओ: ए जीवनी , स्ट्यानफोर्ड: स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, 1 999।
Horatio Hornblower - कुन आदेशमा तपाईंले उपन्यासहरू पढ्नुपर्छ?
झेंग हे, मिंग चीनको महान् एडमिरल
टाइल्सको दिन: फ्रांसीसी क्रांतिको पूर्ववर्ती
गिल्स डी रस 1404 - 1440
रुपर्ट ब्रोक द्वारा सैनिक
फारसका प्राचीन शासकहरूको समय (आधुनिक ईरान)
टाइमलाइन: झेंग उहाँले र खजाना बेड़े
पहिले र अहिलेको बारेमा कुरा गर्दै अघिल्लो र वर्तमान बीचको भिन्नता
अफ्रिका अमेरिकनहरूलाई रुचिको छुटहरूको सूची
इवो ​​डेवो के हो?
मध्ययुगीन बचपनको सिकन वर्ष
विस्कॉन्सन विश्वविद्यालय-ला क्रसस विश्वविद्यालय प्रवेश
छठे घर - ज्योतिषी घरहरू
संसारको सबैभन्दा सानो कीराहरू
तपाईंको आफ्नै मेटल डिटेक्टर बनाउनको लागी बच्चाहरु को गाइड
शीर्ष 10 आर्किटेक्चर थ्रिलर्सहरू हराएको छैन
ला fanciulla del west synopsis
'80s देखि शीर्ष 10 कार्टून
धातु: आधारभूत धातुहरूको गुण आधार धातु
10 बिटल्स द्वारा कवर ठूलो गीत
नूहको सन्दूक र बाढी बाइबल कथा सारांश
कतिपय छुटेको बिचमा टाइगर वुड्सले पीजीए टुरमा छ?
फ्लोरोसेंट लाइट साइंस प्रयोग
डप्लग प्रभावको बारेमा जान्नुहोस्
स्प्रिंगफील्ड प्रवेशमा इलिनोइस विश्वविद्यालय
सबैभन्दा कम 18-होल गोल्फ स्कोर रेकर्ड गरिएको छ
स्केचबुक वा भिजुअल जर्नल राख्ने सुझावहरू
कार्बन डाइऑक्साइड आणविक सूत्र
75 प्रतिशत यूएस युवाहरूलाई सैन्य सेवाको लागि अयोग्य
किशोर केटाहरूको लागि समर पढ्ने सूची
परिवारको बारेमा 25 बाइबल बाइबल